जुत्ताको हमला कुन दृष्टिले हेर्नू » Nepal Fusion	Nepal Fusion	जुत्ताको हमला कुन दृष्टिले हेर्नू » Nepal Fusion
जुत्ताको हमला कुन दृष्टिले हेर्नू
कम्युनिज्म भनेको के हो ? कम्युनिज्म को अर्थ के भाषामा परिमार्जन गर्न सकिन्छ ? हक अधिकारबाट बन्चित लाउन–खान नपाएका, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतबाट बन्चित समुदाय अन्याय अत्याचारबाट त्रसित जनता अन्तमा विद्रोह गर्छन् त्यो भनेको कम्युनिज्म हो । कम्युनिज्मको सरल भाषा परिवर्तन अथार्थ विद्रोहको बुझिन्छ ।
सबैले प्रयोग गर्ने दोस्रो सामाजिक नाम भनेको कम्युनिज्म पनि भन्न सकिन्छ । अर्को अर्थमा पीडित समाज एक ठाउँमा एकत्रित हुनु भनेको कम्युनिष्ट हो । विभेद, पुँजीवाद, राज्यसत्ताको विरोध गर्नु कम्युनिष्ट क्रान्ति हो यो तरिकाले बुझ्न् जरुरी छ । पहिलो विद्रोही को हुन त ? पहिलो कम्युनिज्म भनेको सिद्धार्थ गौतम अथार्थ तथागत भगवान गौतम बुद्ध । भगवान गौतम बुद्धले तत्कालीन बाहुनवाद राजशाहीसँग जातिय छुवाछूत, पशुवध, धार्मिक शोषण विरुद्ध विद्रोह गरेका हुन् तसर्थ पहिलो कम्युनिष्ट भन्न सकिन्छ ।
त्यो समय कम्युनिज्म नामकरण नभई किन बुद्धकाल भने त ? ब्राह्मणवादले वैदिककाल भनेर संसारलाई जनाएको हो । लगभग २६०० सय वर्ष पछिल्लोपटक सन् ५ मई १८१८ कम्युनिष्ट दार्शनिक कार्ल माक्र्स जन्मे र यस संघर्षको नामाकरण कम्युनिष्ट क्रान्ति भनेर भयो । समयको साथै १४ अप्रैल १८९१ महान दार्शनिक बाबासाहेब जैविकरूपमा जन्मे । बाबासाहेबले अछुतो समाजको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नु ब्राह्मणवाद सामंती पुंजीवाद संग विद्रोह गरे, संघर्ष गरे त्यो भनेको तत्कालीन कम्युनिष्ट क्रान्ति हो यस्तो बुझ्न् सकिन्छ ।
बुद्धको पालामा बुद्धिज्म अहिलेको कम्युनिज्म हो । लेनिनवाद, माओवाद, आंम्बेडकरवाद बुद्धिज्मको आधुनिकरण नाम कम्युनिज्म हो भन्न अपरिहार्य हो । नेपाल जस्तो देशको निमित्त कम्युनिज्मको अर्को पाटो आंबेडकरवाद अनि माक्र्सवाद दर्शन समाजको आर्थिक, धार्मिक सामाजिक समानताको लागि कार्यन्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ । आंबेडकरवाद र कम्युनिज्म एवटा सिक्काका दुईवटा पहल हुन् । गरिखाने सर्वहारा वर्गबाट परिवर्तनको निमित्त हुने विद्रोह कम्युनिज्म हो । अहिले कमरेड प्रचण्ड माथि जुत्ताको हमला कुन दृष्टिले हेर्नू ।
यही गणतन्त्र हो जनताको शासन ? वा सर्वहारा वर्ग अब कसैको भरमा रहने छैन ? कसै संग डराउने छैन ? शक्तिको भ्रम टुट्यो कि ? “मरता क्या न करता“ भने झै । काम्रेड प्रचण्डले जनयुद्धको म शीर्ष कमाण्डर हो भन्ने छोडे हुन्छ । तर देशको शीर्ष नेतामाथि यस्तो व्यवहार अलि नेपालीलाई सुहाउँदैन । चुनावमा भरि–भरि भोट हाल्ने जिताउने अनि अहिले जुत्ता हान्ने अलि सुहाउँदो भएन । जनयुद्धमा बुवाको मृत्यु भयो भनेर आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो – मेरो मत । युद्धमा कयौंका मरेका छन् । अपांग छन् । बेपत्ता छन् ।
यीनीहरूको कुर्बानी कमरेडले बिर्से छन् यो आफ्नु ठाउँमा छ । जनयुद्धले समग्र नेपालमा हरेकले निरंकुश राजतन्त्रबाट मुक्ती पाएका छौं । हुनुसक्छ जनयुद्धका नायके ठिक नहोलान । यति बलिदान दिएर पनि मौलिक अधिकारबाट नेपाली जनता कोशौं टाढा होलान् र छन् । यस्को सट्टा येस्तो घटना ? कम्युनिष्ट कार्यकर्ता कहिले अन्याय अत्याचार सदैब सहनु सक्दैन भनेर गरेको विद्रोह हो यही हो असल कम्युनिज्म ….! गलत सही कानुनले अनि नेपाली जनता तय गर्लान् म निशब्द ।